Kunzwisisa chimiro cheNyika, Mataundi, Initiatives uye Zviitiko - Nyika yaMarch
Kunzwisisa maitiro e Nyika, Mataundi, Initiatives uye Zviitiko
musha » Kunzwisisa maitiro e Nyika, Mataundi, Initiatives uye Zviitiko
Izvo zvinoita kuti pane kumwe kuvhiringidzika kuti vanzwisise kukwidzirisa basa redu zvinoenderana nekuumbwa kweNyika, Guta uye Initiatives dzewebhu, saka ini ndichaedza kutsanangura icho chinowanikwa nenyaya iyi yese
Basic Kuumbwa kweiyo Initiatives
Chii chaizvo chinonzi kuita?
Maitiro ekugadzira mangani matsva?
Tsanangudzo muchidimbu yekuzadza iyo INITIATIVES template
Tsanangudzo muchidimbu yekuzadza iyo template yeCHITESI
Ndeupi musiyano uripo pakati pekutanga chiitiko nechiitiko?
Ini handina kunyatsonaka pachinyorwa chegrafiki dhizaini uye isa iyo mifananidzo inotevera mirairo
Kune angani matanho anogona kuvepo pane imwe Nyika uye Guta?
Ndinogona here kuva ne URL yakanaka yekuisa mumapepa angu?
Ndingaite sei kuti ndiise zvitsva zvirongwa kana zviitiko kuwebhu?
Ndine zvimwe kusahadzika, ndobvunza kupi?
Chikamu Chekutanga chakakamurwa seinotevera:
Nhamba yepamusoro: Continents
Maitiro Anonamira kubva mumaguta, kana ari emuno, asiwo anorembera kubva kunyika, kana ari emunyika. Makondinendi haarembera nekuti hapana matanho akakura akadaro. Chinhu chinogona zvakare kusevha kubva kune 1 kana nyika dzakati, 1 kana maguta akati wandei. Semuenzaniso: "Nyanza yeMedithera Yorunyararo" inogona kutanga:
Nyika: Italy, France neSpain
Maguta: Barcelona (Spain), Genoa (Italy), Marseille (France)
Naizvozvo chirongwa ichi chingabatanidzwa ne3 nyika uye 3 maguta. Kazhinji, kana ari iwo chete maguta anotora chikamu, uye kwete pamazinga enyika, chinhu chakaringana kungave kubatanidza zvirongwa chete padanho reguta, kwete pamwero wenyika. Kuti chirongwa chinosanganiswa padanho renyika chinoreva kuti chero munhu kubva chero kupi munyika anogona kutora chikamu. Asi mune iyi kesi, hazvibviri kuti munhu anobva kuExpremadura atore chikamu, uye nekudaro, chinhu chine musoro chinogona kunge chiri chekubatanidza chirongwa ichi chete pamwero weguta.
Uku ndiko kunganyanya kuvhiringidza kunogadzirwa. Chinhu chirongwa chakafanana neprojekita. Chero chirongwa chipi chaunoda kuita ihurukuro. Chigadzirwa chacho chaigona kunge chakanzi "march mapurojekiti" nekuchinjika. Zvisinei: Chii chirongwa kana chirongwa?
Chinangwa kana chirongwa chirongwa chatiri kuronga kuita. Semuenzaniso, boka muMedellín rinosangana nechinangwa chekugadzira chirongwa cheWorld March. Iyo projekiti ichaitwa: "Kuzivisa kusimudzira muzvikoro mudunhu risiriolence". Iri boka rakadana: "VaMedellinians yekusaita zvemadziro”Rinenge riri boka rekusimudzira pachirongwa ichi.
Asi kamwe-kamwe, rimwe boka rinobva mudunhu rakadanaChikwata chinoshandira rugare”Anobatana nechirongwa ichi, achive mapoka maviri anobatana muchirongwa ichi.
Iye zvino zvikwata zviviri izvi, zvinotanga kutumira mameseji kuzvikoro zvakasiyana, nechinangwa chekuti vanyorese kuti vaite basa rimwe chete kana akawanda mukati mechirongwa ichi kana chirongwa ichi:Kuzivisa kusimudzira muzvikoro mudunhu risiriolence". Chikoro chakanzi: “Antares Medellin Chikoro”Vanofunga kuita konsati neboka rechikoro uye vobva vapa mazwi mashoma ekusafarira November 12 na9:00.
Chikoro che "Colegio Antares Medellín" chingave chinotevedzera.
Uye kongiri yacho yaizove yekutanga "Chiitiko" Chekutanga. Ngatimufonere "Kuratidzira kwekusingaite mhirizhonga yeChikoro cheAntares".
Zvinoitika kuti konzati yacho ibudiriro, vatori venhau vemunharaunda uye 500 vanopinda. Uye isu tinoita nhau pawebhu inonzi: "La Marcha anopinda konzati inonakidza yekusaita utsinye muMedellín". Idzi dzingave nhau dzinosangana nechirongwa.
Saka, sezvatingaone, chirongwa kana chirongwa chirongwa chinogadzira mikana, nzira yekubatanidzwa muchikwata uye zvakare nzira yekuratidzira vanhu vanobatana.
Mukuwedzera uye sekupedza kwechirongwa, zvinokwanisika kuve nechimiro mukati meiyo danho, nechinangwa chekuti kana semuenzaniso, tinoda kuratidza webhu kuzvikoro zveMedellín uye kuti vanosaina fomu rekunyoresa, vanozviitawo.
Kuti ndinzwisise zviri nani kuti chirongwa chakamira sei, ini zvirinani ndinopa muenzaniso webhu: https://theworldmarch.org/iniciativas/italia/escuelas-italia/
Uye zvakare, zvingaitwe neimwe nzira, chirongwa ichi, chakatarisana zvikuru neguta reMedellin, chichaonekwa padanho reGuta. Kunyangwe muColombia, mune iyi kesi, hapana zvakawanda zvinoitwa padanho reguta uye inosarudzwa kuti iite zvese padanho renyika, sezvo ingangoonekwa chete mune yenyika chikamu cheColombia.
Semuenzaniso padanho reGuta: https://theworldmarch.org/region/espana/coruna/
Muenzaniso paNyika level: https://theworldmarch.org/region/espana/
Muchokwadi, zano rangu raive rekuve nemafomu pawebhu, kungoazadza uye kurodha zvakananga. Dambudziko nderekuti izvi zvinodhura zvakanyanya maererano nenguva, uye chekutanga ini ndoda kuona kana paine zvakawanda zvekuita kana kwete. Kana paine achave ari 10 ekutanga vhiki, saka hazvina kukodzera. Kana tikawona kuti chiero chinokwira kumusoro, ipapo chimwe chinhu chichaitwa kuyedza kuchengetedza imwe nguva mune izvi.
Asi parizvino hurongwa hwaticha tevera hunotevera kugadzira chirongwa:
Ini ndakagadzira iyo inotevera template muGoogle Docs:
Ingo ita kopi, zadza iyo ruzivo uye unditumire iyo link kune template yakazadzwa mukati. Kana iwe usingazivi maitiro ekugadzira iyo kopi, saka iwe unondinyorera uye ini ndoigadzira kwauri uye ini ndinotumira kwauri. Query maimeri vanovatumira ku: info@theworldmarch.org
Ini ndichatsanangura kuti iyo template inozadzwa sei, ichitevera muenzaniso mune yakapfuura chikamu:
Zita rechirongwa: Kuzivisa kusimudzira muzvikoro zviri mudunhu risiriolence
Mavara nerondedzero yechirongwa: Pano iwe unofanirwa kutsanangura kuti nyaya ndeyei. Semuenzaniso: Chinangwa chedu ndechekugadzira ruzivo pakati pevagari veMedellin nezve kukosha kwehupenyu husina hupenyu kubva pazera rekutanga, uye nekuda kweizvi isu tichasimudzira nhevedzano yezviitiko zvinoshanda kuzadzisa ichi chinangwa, kunyanya chinangwa kuzvikoro izvo zvave izvo kufarira kwakawanda kwakaratidza muchirongwa ichi.
Adhesion Fomu: Kana isu tiine Google Fomu rekuti zvikoro zvitevedzere, saka chinongedzo kuGoogle Fomu iri mubvunzo. Muenzaniso: https://forms.gle/31qsXpCgAK1sz58M9
Mashoko akabatanidzwa: Mune ino kesi, kana semuenzaniso isu tine bhurosha rePDF kana reJPG poster, taizoisa
4a) Faira: Icho chinongedzo neDropbox kune iyo faira
4b) File File: Kudzidziswa kabhuku kekutanga
Kukurudzira Masangano: Mune iyi nyaya isu takanga tava kuti kune vaviri:
5a) 1 Sangano:
zita: Medellinenses yekusava nemweya
Logo: Batanidza nechiratidzo muIMGUR
Address URL: http://neworleansnoviolentos.com
5b) 2 Sangano:
zita: Chikwata chinoshandira rugare
Address URL: http://equipoactivoporlapaz.com.co
Vakakurudzira Vatori vechikamu: Mune ino nyaya taizoisa zvikoro zvinotora chikamu
6a) Mutori wechikamu 1:
Chikamu Chechikamu: Colegio Antares Medellín
Logo: Batanidzai nhovo muIMGUR yechikoro
URL kero: https://www.colegioantares.edu.co/
Chinyorwa cheAccence: Chinyorwa chakatipfuura isu chikoro chekunamatira, kana tsananguro yechikoro. Semuenzaniso: "Chikoro chekusheedzera, chiri munharaunda yeRobledo, chiri kufara kutora chikamu mune zvinoitika zvakasimudzirwa neWorld March neshoko iri:" Zvakakosha kusimudzira rugare kubva pazera diki kuenda pasi rakabudirira "
Adhesion vhidhiyo: Iyi sarudzo, imwecheteyo vhidhiyo kana kwete. Mune ino kesi, kana pasina vhidhiyo, inosara isina chinhu
Zviitiko Zvakabatana: Zvinonyanya kuitika, kana isu tichigadzira chirongwa chekutanga, hapasati paine zviitiko zvakarongwa. Asi kana paine, ipapo isu tinopfuurira kuchikamu chinotevera chekugadzira Zviitiko. Muchikamu chino iwe unongofanira kundipa zita reZviitiko zvawakagadzira muzviitiko template.
- "Kongiresi yekusaita mhirizhonga yeChikoro cheAntares"
- "Chiratidzo chevanhu cheSan Jose de la Salle Chikoro"
Kunyangwe isu takagara mune yepfuura point nhamba 7 kana kana isu tichida kugadzira chiitiko kubva ku0, isu tinofanirwa kutevera iyo yechiitiko template template iyo inotevera:
Sezvakaitwa neye Initiatives yekugadzira template, tinogona kugadzira kopi ye template uye ndokuipfuudza kwandiri kana kundikumbira kuti ndikupe kopi kana iwe usingazive kuzviita.
Ini ndichatsanangura kuti iyi template inozadzwa sei, ichitevera muenzaniso wechiitiko chekare chekonsati:
Chiitiko Chiitiko: Konsati yekusaitirwa mhirizhonga kweChikoro cheAntares
Chiitiko Tsanangudzo"Chikoro cheAntares chakanakirwa nekuita kuti chikoro chechikoro chivepo kukoka munhu wese kutora chikamu mukonati inosimudzira mweya werunyararo uye kusazvibata kune vese vanenge varipo, kuwedzera kumukuru wezvechikoro, Federico Garcia , inokweretesa kuti ipe hurukuro kusimudza ruzivo nezvekusava nemafambiro uye muvambi wesangano reMedellinctions nekuda kwekusazvibata uchapawo mazwi mashoma "
Chiitiko Kutanga Zuva: 12 / 11 / 2019
Chiitiko Kutanga Nguva: 9: 00
Kupera Zuva reChiitiko: 12 / 11 / 2019
Kupera Nguva yechiitiko: 12: 00
Inoratidzwa mufananidzo wechiitiko: Semuenzaniso, chinongedzo kune IMGUR umo panorama yakanaka yechikoro ichibva mudenga, zvakakosha matanho 960 × 540 pixels.
Chiitiko Nzvimbo Yezita: Antares College
Chiitiko Guta: Medellin
Chiitiko Chiitiko: 88a mugwagwa, 68-135
Post Code: Hazvishande
Chiitiko Chiitiko: Andiyoki
9a) 1 Anoronga
Kuronga Zita: Chikwata chinoshandira rugare
Kuronga runhare: + 5744442685
E-mail Kuronga: francisco@equipoactivoporlapaz.com.co
Mufananidzo neAditoror Logo: Batanidza nechiratidzo muIMGUR
Kuronga URL: http://equipoactivoporlapaz.com.co
9b) 2 Kuronga
Kuronga Zita: Fernando Tejares
Kuronga runhare: + 5744785647
E-mail Kuronga: fernando.tejares@gmail.com
Mufananidzo neAditoror Logo: Batanidza sarudzo kumufananidzo waFernando paMIMURUR
Kuronga URL: Munhu uyu haana URL
Chinhu kana chirongwa chiri chimwe chikamu chechirongwa chakakura. Ndokureva: semuenzanisoGungwa reMediterranean reRugare”Ichi chingangove chirongwa.
Asi kana mukati me "Nyanza yeMedithera Yorunyararo" iwe unosvika muBarazil uye hurukuro yakaitwa muBarazil hurukuro iyoyo inonzi: "Kuzivisa runyararo muBarcelona”Chingave chiitiko PAKATI pe" Gungwa reMedhia Rugare "kutanga.
Izvo zvinofanirwa kuve pachena kuti chirongwa chimwe chete chinogona kuve ne1 chiitiko chimwe chete kana akati wandei.
Asi pano ini ndichatsanangura chimwe chinhu chinoburitsa kuvhiringidza kukuru: Chiitiko chinogona kuratidzwa pawebhu, munzira iri yega, yakabatana neguta, kana yakabatanidzwa nechirongwa.
Izvi zvinoreva kuti HAKUNA ZVESE ZVAKAITIKA zvinofanirwa kunge zviine chinangwa chakabatana.
Semuenzaniso: Kana musi waZvita 12, 2019, pachave nekonisheni muBuenos Aires yeRunyararo, asi chirongwa chisina kumutswa, chakangomuka zvangoitika ipapo, ipapo mukati meguta reBuenos Aires, kana padanho renyika reArgentina. : "Konsati muBuenos Aires for Peace”SEZVIRI MUKATI.
Kune rimwe divi, kana tichida kuronga chirongwa chesangano, nezviitiko zvinoverengeka, vanobatika, vanoronga, nezvimwe, kuBuenos Aires, maererano nechirongwa chakakura, semuenzaniso: "Kuparadzirwa kweshoko rerunyararo muBuenos Aires", Saka ichi chaigona kuve chirongwa, uye"Konsati muBuenos Aires for Peace”Chichava chiitiko chakarongedzwa, mukati mechirongwa ichi.
Mhedziso: Chinhu chinogona kuve ne1 kana zviitiko zvakati, asi hazvisi zvese zviitiko zvinofanirwa kunge zvine chirongwa chakabatana.
Pane chirongwa chiri nyore kwazvo chepamhepo chinokutendera kuti ugadzirise mafoto:
Heino mufananidzo unovhura uye mutoro:
Ukuru hunoshandurwa kuti hukwane saizi yandinokumbira.
Semuenzaniso, kana tine mufananidzo we1500 x 800, uye isu tinoda kuiisa mu960 x 540, tobva taita Resize (regedza), kusvika pakukwirira uye ichave iri: 1012 x 540px
Ipapo iwe unofanirwa kudyara iwo mufananidzo kuti ukwane 960 x 540, kureva kuti, isu tinodzika upamhi hwe1012 kusvika 960
Uye pakupedzisira isu chengetedza pano (muPNG kana JPG hazvina basa) uye tinya iyo mufananidzo kune IMGUR: https://imgur.com/upload
Kana uchiri kutevera matanho aya iwe uchiri kuwona zvakawoma, tsvaga mumwe munhu kuti akubatsire nezvinhu izvi nekuti ndicho chidiki chinodiwa webhusaiti.
Hakuna muganho. Muchokwadi chirongwa chinogona kugoverwa nemaguta akati wandei uye nenyika dzinoverengeka panguva imwe chete, sezvakaita nyaya yeMedithera Yorunyararo
Kana zvichiita. Ma URL anowanzo kuve akareba sezvatakamboona, uye izvi zvinogona kuita kuti zviome kuzvinyora mupepa rekuburitsa mumugwagwa.
Kana iwe ukatibata nesu info@theworldmarch.org, tinogona kuisa URL inoyevedza.
Semuenzaniso, kana danho rako riri rekubata Zvikoro zviri kuMedellín, tinogona kuisa chimwe chinhu senge https://theworldmarch.org/escuelasmedellin saka vanhu vanopinda nyore nyore.
Izvi zvinoshandawo kumaguta: Kana iwe uchida kuisa semuenzaniso http://theworldmarch.org/medellin kupinda zvakananga padivi peguta reMedellin rakaiswa.
Ingotitumira isu ruzivo rwese ruchitevera matemplate zvichienderana nemuenzaniso kune info@theworldmarch.org
Bvunza mibvunzo yako ku info@theworldmarch.org
Mhinduro dzemibvunzo iyi dzinoiswa mune iyi runyorwa rwe mibvunzo inowanzo bvunzwa.